🥇तपाईले परीक्षाको लागि अध्ययन गर्नुभएको छैन भने
के तपाइँ बारमा पूरै पाठ्यक्रम हुनुहुन्छ? के तपाईले तपाइँका सबै साथीहरूलाई नोटका लागि सोध्नुभयो र तपाइँ एक पृष्ठ पढ्नुभएन? के तपाई अध्ययन नगरी परीक्षा लिनुहुन्छ? ठिक छ, हामी तपाईंलाई सबै कुरा बताउँछौं तपाईले गर्न सक्ने टिप स्क्र्याच गर्न को लागी गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै श doubt्का बिना, यदि तपाईंले केहि चीजहरू खोजिसक्नुभएपछि पनि तपाईंलाई पास हुने आशा छ भने, तपाईंसँग विश्वास छ। तपाईको अन्तिम आशा भनेको प्रार्थना गर्नु हो (ताकि शिक्षकले परीक्षाहरूलाई मिस गरेन ...)।
सही समयमा कसरी छोड्ने भन्ने बारे जान्दै
यदि १ minutes मिनेटमा तपाईंले तीन घण्टाको परीक्षा समाप्त गर्नुभयो भने, यसलाई नत्याग्नुहोस्! कहिले पनि होइन! तपाइँ सधैं उठ्नको लागि अरू कसैलाई पर्खनु पर्दछ र आफैलाई एक मूर्ख बनाउन पहिलो हुनुहुन्न। पक्कै पहिलो एक पछि, कक्षा को आधा खाली पाना संग उठ्नेछ र तपाईं बाहिर लुक्न सक्नुहुन्छ।
भाग्य मा विश्वास गर्नुहोस्
के तपाइँ परीक्षण प्रकारको टेस्टको अगाडि हुनुहुन्छ? तपाईं भाग्यमानी साथी हुनुहुन्छ! ढाँचा सिर्जना गर्न कोशिस गर्नुहोस्: ABCDAB ... र यदि तपाइँ उत्तर A लाई प in्क्तिमा १० प्रश्नहरूमा सही छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँले यो गलत पाउनुभयो ... अनियमित रूपमा केही परिवर्तन गर्नुहोस् ताकि तपाइँ यति धेरै गाउनुहुन्न। र सबैभन्दा माथि, निराश नहुनुहोस्, नबिर्सनुहोस् कि तपाईं खेल्न आउनुभएको छ, परिणाम फरक पर्दैन!
अप्रत्याशित मोडहरू बनाउनुहोस्
उनीहरूले तपाईलाई यस्तो विषयको बारेमा सोध्छन् जुन तपाईंले सुन्नु भएको छैन, तर तपाई पनि त्यस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ? ठिक छ, तपाईंसँग शिक्षकको प्रश्न बदल्नको लागि उत्तम समय छ, अवधारणाहरु लाई लिंक गर्न शुरू गर्नुहोस् बिभिन्न कुराहरुको बारेमा कुरा गर्न, तर यसलाई सुरक्षित तरिकाले गर्नुहोस् र तपाईले जानेका सबै कुरा वर्णन गर्नुहोस्। पक्कै केहि थोप्लाहरू यस विषयको लागि पर्दछ कि तपाईंले अर्को विषयलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्थ्यो, र तपाईं आफैले आफूलाई "मलाई प्रश्न सोचेको छैन" भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाई सम्पूर्ण पाठ्यक्रममा कुनै पनि कक्षामा हुनुहुन्न? यसैले तपाईले यस विषय मा रुचि राख्नु भएन। तपाईसँग जहिले पनि शिक्षकसँग प्रश्नहरू सोध्ने संसाधन हुन्छ कि कुनै उत्तर आएको छ कि भनेर हेर्न, वा अन्य विद्यार्थीहरूले सोध्दा सुन्नुहोस् यदि तपाईं यसको लाभ लिन सक्नुहुन्छ भने।
सकारात्मक मनोवृत्ति अपनाउनुहोस्
के तपाइँ यसको साथ यो गर्न सक्नुहुन्छ लाग्छ? त्यसोभए कुनै विचार दिमागमा आएको हो कि भनेर हेर्न एकाग्रताको अनुहार राख्नुहोस्। यो धेरै असम्भव छ, तर यदि तपाईं केवल कुन पुल मुनि तपाईं बस्नुहुनेछ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, पक्कै पनि तपाईं अनुमोदन गर्नुहुने छैन।
छवि महत्त्वपूर्ण छ।
के तपाइँलाई जवाफ दिने धेरै थोरै विचार छ? कमसेकम यसलाई सुन्दर बनाउनुहोस्: प्रस्तुतीकरणको ख्याल राख्नुहोस्, एउटा सुन्दर र ठूलो अक्षर बनाउनुहोस्, नियम प्रयोग गर्नुहोस् ... एक ठूलो लाइन बनाउनुहोस्, ताकि शिक्षकले यसलाई स्पष्टसँग पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको आँखा थाम्न नसक्दा तपाईंलाई निलम्बन गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ अध्ययन नगरीकन परीक्षा लिनुहुन्छ र पास गर्न आवश्यक छ भने, तपाइँले सबै स्रोतहरू निकास गर्नुपर्नेछ। तपाईंले कटलटको उन्नत टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्नेछ: तपाईको हातमा सुत्रहरू लेख्नदेखि लिएर फोनलाई रस ईंट भित्र राख्नुपर्दछ।
आविष्कारक प्रयोग गर्नुहोस्
उनीहरूले तपाइँलाई चिसो युद्धको बारेमा सोध्छन् र तपाइँलाई थाहा छैन के भयो? ठीक छ, समाधान स्पष्ट छ ... हेरौं कति पृष्ठ तपाईं यसलाई चिसो को बारे मा कुरा भर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंसँग विकल्प छैन तर साथी हो, यदि उनीहरूलाई के सोध्छन् केहि थाहा छैन भने, तपाईंले प्रतिलिपि गर्नु पर्छ। तपाईंले प्रतिलिपि गर्नै पर्छ! यदि तपाईंले आफ्नो सहपाठीको फोटोकपीमा आफ्नो तलब छोड्नु भएको छ (जसलाई पढ्न समय थिएन ...), यो सम्मानको कुरा हुन्छ। के तपाई पट्टीको साथीको छेउमा बस्नु भएको छ? यो राम्रो विचार भएको छैन ... भूमि निरीक्षण गर्नुहोस्, नर्डहरू खोज्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस् कि उनीहरू धेरै राम्रा लेख्न सक्छन्। जब तपाइँले सिकार छनौट गर्नुभयो ... प्रतिलिपि गर्नुहोस्!
तर कहिले पनि नबिर्सनुहोस्, यदि पार्टनरले "मलाई थाहा छैन" भन्छ भने तपाईले "मलाई न पनि" लेख्नु हुँदैन, तपाई एक बच्चा गाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाईंले आफ्नो जीवनमा यी मध्ये कुनै पनि टेक्निक प्रयोग गर्नुपर्‍यो? यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभएको छैन भने, यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईं एक महान विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तर हुनसक्छ एक दिन तपाईंले चरम अवस्थामा एक प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
जिज्ञासु घर व्यवस्था
तपाईंको पार्टनरसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको बहाना